Orinasa sy mpanamboatra China Gratour V5 | Foton
Voafehy ny zava-drehetra
Karazana vatana 1640
• Avy amin'ny hevitra mamorona eropeana, mandrindra endrika sy fisehoana maneho ny fahatsapana filaminana • Famolavolana tarehy tsy manam-paharoa, ahafahan'ny fahatsapana milamina sy tsara tarehy
Angovo novolavolain'i Foton tsy miankina
Karazana toetra: 16V + DOHC + MPFI
Miteraka (mm): 69.7
Teboka (mm): 79
Famindrana (L): 1.206
3 fihodinana famakafakana sy fanovana mahery vaika CAE, miantoka ny fahombiazan'ny ampahany chassis mitsikera; fitsapana sy fanovana azo itokisana ny fiara iray manontolo, ahafahan'ny fiara mandavantaona mandritra ny 10 taona na 200.000 km
Famolavolana vatana havaozina
Volavola 8-hazo fijaliana mpikambana, mamela ny fanoherana ny fiatraikany tsara indrindra Raha oharina amin'ny fiara fitateram-bisy mahazatra, nitombo 10% ny refin'ny hazo fijaliana, nitombo 20% ny hatevin'ny vy; 58% ny vatan-kazo vita amin'ny vy mahery.
Vakin-dambam-baravarana any aoriana, miantoka ny freins farany indrindra
Faritra mitondra fiara mampiasa famolavolana kompartim-barotra, famolavolana sahaza. Footboard manala anao amin'ny kodiaran'ny dia.
Trambo anatiny misy ambaratonga roa, maneho ny fahatsaran'ny hatsaran'ny fiaran'ny mpandeha. Toerana fitehirizana 13, mitarika vokatra mitovy aminy.